I-HGH ye-pharmacy kwi-intanethi yaseBangkok inikeza ukunikezelwa ngamazwe ngamazwe kuwo wonke umhlaba nge-post ye-UPS yokuqala yeposi, kuthatha iintsuku ze-2-3. Siqinisekisa ukuthunyelwa e-Australia, eU.SA, eCanada, eUnited Kingdom, eRashiya, eYurophu, e-Asia nakwamanye amazwe. Ku
Amazwe aseMiddle East kuquka, i-Saudi Arabia, i-United Arab Emirates.
Indlela esinika ngayo ukuhanjiswa?
Emva kokuba umthengi agqityiwe kwaye ahlawule umyalelo wakhe kwiwebsite yethu (umz SWIFT) Silungiselela i-hormone yokukhula ukuba ithunyelwe kwilizwe lakhe, i-hormone yokukhula ifakwe kwiipakethe ezikhethekileyo ukuze kugcinwe ukubandayo kwangaphakathi, okuqinisekisa ukuba iimeko ezigcinwe kakuhle kuzo zonke iinkqubo zokuthumela. Emva koko sibiza i-UPS yenkonzo yeposi, i-courier ilungiselela amaxwebhu afanelekileyo ngenombolo yokulandelela.
Umyalelo wakho, umzekelo V022 6083 XXX.
Ngaphambi kokuba uthumele i-oda yakho kwinkonzo yokuhambisa, sihlaziya ixesha elithunyelwe kwi-UPS. Ngoko kuya kuncitshisa ixesha lokugcinwa kwe-oda yakho yepelesi kwi-stock kuncinane kangako. Umzekelo umqulu ofunyenwe yi-UPS ngoMgqibelo ekuseni, uya kushiya ngoMgqibelo ebusuku kwaye umthengi uwamkela umnyango ngendlu ngoMvulo.
emva kokuba sithumele iplasela, inombolo yokulandelela yomyalelo wakho siya kuthunyelwa kwidilesi yakho ye-imeyile.
Uza kufumana ulwazi lokuthumela kunye nenombolo yokulandelela i-V022 6083 XXX Ngaliphi na ixesha unokujonga indawo ehlaziyiweyo kunye nomzila wepafile yakho kwi-intanethi. Oku kunokwenziwa kwiwebhusayithi esemthethweni.
gcwalisa inombolo yakho yokulandelela kwaye ufumene ulwazi malunga nepilisi naliphi na ixesha.
Ngaba sinokufumana iingxaki kumasiko okanye ekuthinjweni?
Abathengi abaninzi ngaphambili babeyalela i-hormone yokukhula kwezinye iiwebhusayithi kwaye abazange bavuyiswe. Ezinye iipakethi zazingathathwa kuphela kumasiko kwaye azizange zithathe impahla yazo. Ivenkile yethu iqinisekisa ukuhanjiswa kwindlu yomnyango, sinamava ekuhambiseni iHGH yokukhula kwe-hormone ngaphezu kwe-5 iminyaka kuwo onke amazwe ehlabathini.
Siyazazi iinkcukacha ezithile zokukhutshwa kwamasiko kumazwe amaninzi. Ukuba kuyimfuneko, sidibanisa uxwebhu oluhamba kunye neReceipt kwisiqendu.
Ukongeza kwi-penmo-packaging pen ihlelwe ngaphambili kwimeko ekhethekileyo yepensile eqinisekisa ukhuseleko lokukhutshwa kwamasiko kunye nokuthintela ukuthunjwa.
Yonke imiyalelo ye-HGH ipakisha kwiphakheji ekhethekileyo ukuze ibambe ubushushu obuqhelekileyo, kungekho ngaphezu kwe-12-16 degrees.
Ngokwezi vavanyo zebhubhoratri, ayichaphazeli umgangatho wemveliso, kunye namaxesha amfutshane okuhamba (ixesha lokuhambisa).
Naliphi na ukuhanjiswa okwenziwa eMalaysia ngaphambi ... nayiphi na ingxaki ejongene nesiko saseMalay .. ..? Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuhambisa kwi-ntlawulo yokuqinisekisa ...
Sawubona, ndibomvu umtsalane ukuze bahlolisise yonke into evela kwelinye ilizwe, ukuba ihlolwe iya kuqhubeka igcina
udini Aprili 10, 2018
Ndifumene umyalelo wam ngoJanuwari 15th, ndiyaneliseke kakhulu ngokuthunyelwa kwamanye amazwe.
iintsuku ze-5 kuphela kwi-Australia
IINKCUKACHA - NDIKHONA ... NGOKUBA